Gannett Inoda Kuti Ibvise Musoro Wayo Kubva Mubutiro Rayo | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 12, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wese munhu akanzwa nezve kutaura uine musoro wako kumusoro garo rako. ne Gannett, ivo chaizvo vakaunza kutaura kwacho kuchokwadi, zvakadaro. Ruth Holladay akaipa sarcastic blogger ane rurimi runopinza ... uye akafa-pamusoro, kunyanya kana iri anouya kuna Gannett uye iyo Indianapolis Star.
Isu tese taimboshanda ipapo, Ruth achirega basa rekunyora uye ini tichiperekedzwa apo Gannett akaunza VP uyo akabvisa dhipatimendi rese retarenda.
Makuhwa apfuura aya ndeekuti Gannett anogona kunge achigadzirira kutengeswa munguva pfupi iri kutevera. Handina hanya nazvo. Ndakatengesa stock yangu ndichangobuda, ndichiziva kuti kuenda kwangu kwaive chimwe chiratidzo che Monsterus Corporititus, inozivikanwawo se uine musoro wako kumusoro garo rako.
Kutanga imwe kumashure - Ini ndakashandira maviri emapepanhau masangano - Landmark uye Gannett. Kunyangwe iwo makambani maviri aive akafanana muindasitiri, ivo vaisakwanisa kuve vakasiyana zvakanyanya mukutungamira. Nepo Landmark yaitenda mukuzvimiririra kwezvayo zvivakwa uye mamaneja, Gannett anotenda mukutonga.
SeDhatabheki Dhatabheki pane rimwe bepanhau reGannett, ndaive nemakwikwi mudunhu remuno uye mukambani. Izvo zvaive zvisiri zvekunze pachena uye ndaive nehukama hwakakura nekambani - asi chokwadi chaive chekuti, kuti vabudirire, vaifanira kundidzinga mubhizinesi. Kunyanya iyo kambani inogona kuratidza kukosha kwayo nekuvandudza mazano emakambani, zvakanyanya vashandi vavanogona kubvisa kubva mupepanhau remuno. Hupenyu hwavo, mabhonasi, uye kukwidziridzwa zvaitsamira pazviri. Nekudaro, nepo ini ndingave ndakave neruzivo uye ndichiita zvirinani - mhando yeruzivo iyi yaifanirwa kudzikisirwa kunze kuMcLean, Virginia.
Gannett anoita izvi mumadhipatimendi ese, zvakanyanya muchidimbu muKudhindwa. Imwe chete yakakwikwidza mukana chero pepanhau rine pamusoro peInternet uye zvimwe zviwanikwa zvemidziyo itarenda remuno. Ava ndivo vanhu vakagadzira hukama munharaunda uye vanoziva kuti kupaza uye kunetsekana kuri kupi kana zvasvika kune kwedu hutungamiriri hwevagari. Iri zvakare iro dhipatimendi rinoita kunge rinopa zvibayiro zvakanyanya. Vanhu vandaishamwaridzana navo muHurumende vakashanda matako avo masikati neusiku nematoni emabasa akavhurika aisazombofa akazadzwa. Vazhinji vavo vaenda izvozvi… kurasikirwa kukuru kweguta rino.
Zviri Nyore Kuona KWAPO iyo purofiti kuenda:
Iyo Indianapolis Star ikozvino musanganiswa weAP uye kushambadzira nekusasa kwenzvimbo yekuzivisa mukati. Nyanzvi dzeindasitiri dzinokuudza kuti kucheka uku kwave kudikanwa nekuti vanhu vari kutendeukira kuWebhu kuti vawane nhau uye ruzivo.
Ini handikwanise kuisa mumazwi kuti zvinonditsamwisa sei. Zvakafanana nekupomera Toyota kukundikana kutengesa mumotokari dzepamba. Vashandi veGannett Corporate havana wekupa mhosva asi ivo pachavo. Ivo vaive nemukana wekuwedzera chimiro chavo chakasimba munharaunda uye vakaishandisa kune ese kushambadza uye yekunyora. Panzvimbo pezvo vakaita pepanhau remuno kuregedza kutonga kukambani.
Kutarisa kumwe kuThe Indianapolis Star maringe naGannett kunopa humbowo hwakajeka hwekuti zvinhu zvinoshanda sei.
Nepo Gannett akahwina mibairo neimwe yemakambani makuru emunyika, Indianapolis Star inogona kuvhota seimwe yeashata kwazvo muguta. Ndakatanga kushanda muchivakwa chakabatanidzwa, chivakwa chemuAmerica… icho chainyeperwa kuti chingagare kunze kwenzvimbo dzekutanga shoma. Ndinoona kuti izvi hazvisi ari chinyorwa, chingori chiratidzo chikuru chazvo.
Zvinotaridza kuti michero yemubhadharo iri kutsigira kuburikidza nekukwezva uye kutenderera kurasikirwa. Munzvimbo imomo, iyo Nyeredzi inoenderera nekuwedzera iyo yekugadzirisa ine mifananidzo uye mablog mablog kubva kune vaverengi vayo. Kunyangwe ini ndisingabvumane kuti ichi chisarudzo chikuru chebhizinesi, zvinosuwisa kuona iyo mari ichichengeterwa kumakambani panzvimbo pekudyarwa mu tarenda remuno.
IndyMoms: BUDIRO RENZVIMBO
IndyMoms muenzaniso wekuita zvinhu nemazvo. IndyMoms 'General maneja ndeye Jennifer Gombach, mukadzi ane tarenda anoshamisa wandakave nemufaro wekushanda naye paThe Star.
Jennifer haangori mushambadzi ane tarenda, munyori uye muzvinabhizimusi, iyewo wemuno uye anga aine pepanhau kwenguva yakareba kwazvo (uye aigara achiregeredzwa). Ndingadai ndakada mukana wekushanda pasi paJennifer ini ndiripo. Aive mukuru chipangamazano uye shamwari yakanaka.
Izvo Gannett ANOFANIRA KUITA
Kana Gannett achinyatsoda kuzviita, kuraswa kunoda kutanga nevashandi vavo vekambani. Ini ndinokumbira ruregerero kushamwari dzangu uye vandinoshanda navo pamberi penguva, asi apa ndipo pane matambudziko ako.
Ipa rako repanhau repasirese kuzvionera kwavanoda kutsigira bhizinesi. Vabvumire ivo 'kuisa mari' mumabhizinesi avo asi vabate vanozvidavirira. Investment inoda kutema muzvikamu zvemubhadharo zvavakakura vachida kumuzinda asi zvakafanira. Kutanga kusimudzira kubva mukati memapepanhau pane kuvhiringidza tarenda munyika yese.
Tarisa uone zvakaitwa naJennifer nemaIndyMoms. Ndeyenharaunda, ndeyako, uye yakanaka. Vakabatana nevaverengi uye vakapa svikiro rakaringana revashambadzi vemuno kuti vasangane nehumwe huwandu hwevanhu. Ndiyo nzira yakakwana yekubudirira uye inogona kudzokororwa kakawanda pamusoro.
Gannett inoda kubvisa musoro wayo kunze kwayo. Vamwe vanhu vanodaro Zvematongerwo enyika ese ndeemuno! Muindasitiri Yemapepanhau, Madhora ese ndeemuno! Ini handidi kubata mweya wangu ndakamirira Gannett kuti azvipise pachawo, zvakadaro.
Martech Zone iri Mukushambadzira Zera rePamusoro 50 Blogs